Iindaba - usetyenziso lwecalcium propionate
I-calcium propanoate okanye calcium propionateinefomula Ca (C2H5COO) 2. Yityuwa yecalcium yepropanoic acid.
4 Amakhonkco angaphandle
Njengokongezwa kokutya, kudweliswe njenge-E inombolo 282 kwiCodex Alimentarius. I-calcium propionate isetyenziswa njengesibambiso kwizinto ezahlukeneyo, kubandakanya: isonka, ezinye izinto ezibhakiweyo, inyama eqhutyiweyo, ivili kunye nezinye iimveliso zobisi.  Kwezolimo, iyasetyenziswa, phakathi kwezinye izinto, ukuthintela umkhuhlane wobisi ezinkomeni nanjengesongezelelo sesondlo.  Iipropathi zithintela ii-microbes ekuveliseni amandla eziwadingayo, njengeebenzoates. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo neebenzoates, iipropionate azidingi imeko ye-asidi. 
I-calcium propionate isetyenziswa kwimveliso yokubhaka njengesithinteli sokubumba, ngesiqhelo kwi-0.1-0.4%  (nangona ukutya kwezilwanyana kunokuba ne-1%). Ungcoliseko lomngundo luthathwa njengengxaki enkulu kubabhaki, kwaye iimeko zifunyanwa ekubhakeni zikwimeko ezikufutshane kakhulu zokukhula komngundo. 
Kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo, iBacillus mesentericus (intambo), yayiyingxaki enkulu,  kodwa iindlela eziphuculweyo zococeko kwindawo yokubhaka, zidityaniswe nengeniso ekhawulezileyo yemveliso egqityiweyo, zilususile olu hlobo lokonakala. [Ucaphulo] ipropionate kunye nesodium propionate ziyasebenza xa kuthelekiswa zombini B. mesentericus intambo nokubumba. 
I-Metabolism ye-propionate iqala ngokuguqula kwayo ibe yi-propionyl coenzyme A (propionyl-CoA), inyathelo lokuqala eliqhelekileyo kwimetabolism ye-carboxylic acid. Kuba ipropanoic acid ineekhabhoni ezintathu, ipropionyl-CoA ayinakungena ngqo kwi-beta oxidation okanye imijikelezo ye-citric acid. Kwiindawo ezininzi ezinomqolo, i-propionyl-CoA yi-carboxylated kwi-D-methylmalonyl-CoA, ebhalwe kwi-L-methylmalonyl-CoA. I-enzyme exhomekeke ku-vitamin B12 ikhuthaza ukulungiswa kwakhona kwe-L-methylmalonyl-CoA ukuya kwi-succinyl-CoA, ephakathi komjikelo we-citric acid kwaye inokufakwa ngokulula apho.
Abantwana bacelwe umngeni nge-calcium propionate okanye nge-placebo ngesonka semihla ngemihla kwitrosi ye-crossover elawulwa kabini engaboniyo. Nangona kwakungekho mahluko ubalulekileyo ngamanyathelo amabini, umahluko obalulekileyo ngokweenkcukacha manani wafunyanwa kwinani labantwana abaziphethe kakubi "ngomngeni" (52%), xa kuthelekiswa nenani lokuziphatha kwabo "okuphuculweyo" kunye nomceli mngeni (19%). [ 9] Xa i-propanoic acid yayifakwa ngokuthe ngqo kwiingqondo zeempuku, yavelisa utshintsho kwindlela yokuziphatha eguqukayo (umz. I-hyperactivity, i-dystonia, ukukhubazeka ekuhlaleni, ukunyamezela) kunye notshintsho lobuchopho (umz.
Ikhalsiyam propionate inokusetyenziswa njengesixhobo sokubulala ukungunda kwiziqhamo. 
Kuhlolisiso olwenziwe ngo-1973 olwachazwa yi-EPA, ulawulo lwamanzi lwe-180 ppm yecalcium propionate yafunyanwa inetyhefu encinci kwi-sunfish ebluegill. 
I-calcium propanoate iye yavalwa kumazwe athile afana ne-Russia ngenxa ye-aleji ethile kunye nokuqunjelwa. 
Ixesha Post: Jul-20-2021